Kpochapụ onye nlekọta kacha mma maka mkpochapu ego na ịchịkọta mmadụ nile: Martin Vrijland
Kpochapụ onye nlekọta kacha mma maka mkpochapu ego na ịchịkwa ndị mmadụ niile
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 1 July 2019	• 6 Comments
Nsogbu, ego ọgwụ ọjọọ, kpochapụrụ Ferraris na Lamborghinis, ndị omempụ ọgba tum tum ndị na-awakpo "mgbasa ozi onwe ha" ma gbuo onwe ha. Netherlands bụ mba ọhịa dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ! Ọ dị ize ndụ, n'ihi na na mgbakwunye na ndị niile na-alọghachi jihadists na ndị IS-eyi ọha egwu, ATM na-agakarị ikuku na bank na-agbalị ịnọgide na-na niile na-akpata laundering omume. N'ezie, ọnọdụ Dutch ejirila na njedebe kpamkpam ma ọ bụ ya mere anyị ji achọkwu nyocha maka ụlọ akụ, a ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ na ọrụ ndị ahụ ma mgbe nke ahụ gasịrị, anyị nwere ike ibi ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla na ala tulips, ihe ndị na-agba mmiri na ọgwụ ndị dị nro. oriri na ụlọ ahịa ndị mara mma kọfị.
Ị maara ha aghụghọ. Onye na-ebu swiva nke na-agbasasị mbọ na okporo ụzọ; ahia nke iko nke na-acho umuaka ole na ole site na obodo nke Eastern Eastern iji kpoo windo; onye na-edozi sistemụ nchebe bụ onye na-edozi ụfọdụ burglaries. Ị maghị ha? Ọfọn, mgbe ahụ ị nwere ike na-ele akwụkwọ akụkọ na TV ọtụtụ ma kwere ihe niile ị nụrụ ma hụ. Ị nwere ike ịhazi mpụ n'onwe gị, nke mere na ị mepụta nsogbu na ịkụnye ụjọ na ndị mmadụ ma mgbe ahụ ihe ngwọta na-abịa. Ma oburu na i gosiputa ugboala egwuregwu di oke egwu na mgbasa ozi na akuko banyere ndi omekome ndi nwere oke ohia na uchu, gi na ndi mmadu nwere anya na iwe n'otu oge, ya mere I meputara ala ihe ubi zuru oke nke metutara onye obula.
O doro anya na ịchọrọ ịchọta ego ahụ niile, n'ihi na ị na-arụsi ọrụ ike maka ntakịrị achịcha ahụ ma na-egwuri egwu iji mee ka ị nwee obi ụtọ ma dị jụụ. Ya mere, ị gaghị achọ ka ndị omempụ gbapụ ngwa ngwa na ụgbọala ndị ahụ buru ibu na ndụ ahụ dị egwu. Kpee ahia ahụ! Na ego a ga-agbanyụrịrị maka nke a ma ọ bụ na azụmahịa ọ bụla ga-abụrịrị uzo nye ụlọ akụ na ọchịchị? Ukwu! Mee ya! E kwuwerị, ọ nweghị ihe ị ga-ezo. Ya mere, anyị na-aga ego cashless (cashless society) nke ihe niile ị na-eme bụ nke doro anya.
The blockchain na ọkacha mma a bitcoin-dị ka ego mba ga-enye ihe ngwọta! Ọ bụrụ na anyị ejikọta na netwọk 5G na 'ịntanetị nke ihe', mgbe ahụ, kuki ọ bụla, akụkụ ọ bụla steak na ihe ọ bụla ị zụtara ga-achọpụta; ulo igwe maara ihe maara ókè ị na-atụ egwu na ịchọta na steeti maara kpọmkwem ihe ị na-eri; ihe na-aga n'ime. Nke ahụ dị mma, n'ihi na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye ma ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ ọkụ na Monsanto ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-emetụta ụbụrụ gị ma ọ bụrụ na imeju gị na-eto n'ihi na ị na-aṅụ mmanya mmanya 1 na nzuzo kwa ụbọchị. Nchịkwa zuru oke nke ndị mmadụ, oriri ya, mmefu na ịzụta ihe eji eme ihe bụ ọnọdụ kachasị maka ọchịchị ọchịchị. Ọ dabara na anyị nọgidere na-akpọ ya onye kwuo uche ya ma anyị nọgidere na-ekwere na ọ dị anyị mma. O nweghị ihe na-ezighi ezi na ịchịkwa ndị mmadụ niile. E kwuwerị, nke ahụ na-aga nke ọma na China!
Ma ọ bụrụ na ọtụtụ iwu na ụkpụrụ dị iche iche na ị ga-emebi iwu n'ebe ọ bụla n'ime obere ọrụ ahụ, steeti nwere ike iji nlezianya hụ na ị nweghịzi ike ịzụta ihe ọ bụla. Ọ dị mma, ị ghaghị ịnụ banyere ya na akwụkwọ dị otú ahụ. Na nke George Orwell maka ihe atụ (1984) ma ọ bụ na Bible (usoro anụ ọhịa ahụ). Otú ọ dị, anyị na-ahọrọ ịnọgide na-enwe ịhụnanya na nchekwube. Anyị niile ga-adị mma, n'ihi na anyị bụ Netherlands! Orange, ị mara! Ala nke Max Verstappen, nnukwu football, ndị DJ kacha mma, ememe kachasị mma, klọb na ụsọ oké osimiri. Obodo nke nwere ike ịnapụta ndị ọzọ EU president! Anyị bụ n'elu! Ya mere, ma ọ bụrụ na ọ dịrịrịrịrị na ọ na-esiri anyị ike, nke ahụ dị mma. Ka anyị were olileanya nke onye ụkọchukwu anyị dị ka ihe atụ ma nọgide na-amụmụ ọnụ ọchị! Ọ ga-adị mma; ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị egwu! Na-atụkwasị obi ma kwe ka ya mee gị.
Ma ọ bụrụ na ị kwenyere na Onyenwe anyị Jizọs nwụrụ n'ihi gị n'obe, ihe nile ga-adị mma ma ọ bụ ya; ihe niile ị ga - eme bụ ịnọdụ ala ma soro ndị enyi gị ibe gị na - anọnyere gị ka gị na Onyenwe anyị nọdụ n'akụkụ gị. Atụla egwu, emela ihe ọ bụla: naanị kwere. Na-ejuputa na nchịkọta akpa n'ezie.
ihe njikọ njikọ njikọ: telegraaf.nl
Olee otú steeti ga-esi mara kpọmkwem ebe ị bụ, ihe ị na-eme, ịzụta na ire
Ego nkwụnye ego, Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta n'ebe ego cashless
Grapperhaus na-ekwe nkwa na "ntinye onwe ya" abanyeghị
Nye ndị mgbasa ozi ihe mgbagwoju anya, chụọ odeakwụkwọ odeakwụkwọ (Harbers): ịkwado ahịa
Tags: abolition, cashless, ego, agba, Ferrari, geld, were, Grapperhaus, njide, Lamborghini, onye ozi, cracking, Society
1 July 2019 na 13: 12
Mbụ Vrijland, Echere m na okwu ikpe ikpeazụ gị bụ ezigbo nzukọ. Ọ dịghị ewute gị. Ọ bụ ihe nwute na ị na-ekwu banyere ọtụtụ ndị kwere ekwe na Jizọs Kraịst, ndị na-alụ ọgụ dị ukwuu n'ebe ndị dị n'eluigwe site na Mmụọ Nsọ, na-ahụghị ndụ ha n'anya. Ekpela ikpe.
Site n'ụzọ, ana m enwe ekele maka ọrụ gị na nkwanye ùgwù maka àjà ndị ị meworo iji kpughee ụgha.
1 July 2019 na 13: 35
Ị nwere ike ịkọwara m ọgụ ahụ? Kedu ihe mere anyị ka ga - eji lụ ọgụ na mbara igwe mgbe ihe niile agwụlarị ma edozila atụmatụ ahụ (dịka amụma) si dị? Ka ọ bụ na ọ bụghị otu ihe?
Echere m na okpukpe na-eme ka ndị mmadụ nọrọ n'ọnọdụ ịgba ohu ebe ndị pastọ na-enyere aka ịchọta ezinụlọ eze na ọchịchị onye kwuo uche na-adịghị na ya ("Chineke họpụtara").
Okpukpe na-enye, na mgbakwunye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkwalite na mbelata mkparịta ụka dị mkpa iji mee ihe odide Lucifer.
1 July 2019 na 13: 44
1 July 2019 na 14: 34
M na-atụ anya inweta ihe àmà n'aka gị na "Kraịst" dị. N'ihi na ọ dịghị! 'Kris' dika ebebo ma obu inwe obi uto ezughm. Naanị banye n'ime ya na ndị mmadụ bụ ndị mejupụtara 'Kraịst'. Ọfọn, onye ga-abụ nke ahụ ugbu a. Oge 10 chere.
1 July 2019 na 20: 59
Ezigbo ikike, ọ na-agasi ike na usoro 100% usoro ego.
Mgbe anyị na-ahụ otú ndị okenye si emeghachi omume megide ndị mmegide nke ndị Sinterklaas, ọ na-ekwu zuru ezu. Ọ dịghị nnyocha a na-eme. Sinterklaas ma ọ bụ Santa / Setan malitere na Babịlọn ma ndị na-enyere oji bụ ndị mmụọ ọjọọ na-agagharịgharị na nkwọ. Ọ bụrụ na ị na-achụrụ ha àjà, ha ga-atụ anya ịnọgide ma ọ bụ maọbụrụ na itinye ọbara na ọnụ ụzọ gị dịka dị na Bible.
Ị na-ekwe ka ụmụ gị kwenyere n'egha ụgha site n'oge ha bụ nwata, na-atụ egwu ha site n'inyeghị ụgwọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha adịghị atọ ụtọ. Ha adịghị atọ ụtọ n'ihi nrụgide na ime nzuzu!
Anyị kwesịrị ịsọpụrụ ọdịnala n'ihi na ọ dị mma!
Ịnwekwara ike ịhazi nnọkọ na-abụghị nke ụbọchị anwansi n'onwe gị. Ememe ememe anyị na-agbagha ma na-ahazi lullo anwansi nke na-achị ọchị n'ime uwe ogologo ọkpa ha n'ihi na anyị na-esochi ha anya.
Ọ bụrụ na mmadụ ekwuo ihe banyere ya, o chere na ọ ga-emebi ikuku.
Ana m agwa ụmụ m ebe ọ bụ na ha nwere ike ikwu na Santa Claus bụ onye nzuzu na-edozi anya nakwa na anyị anaghị etinye aka na nnọkọ ndị ahụ.
Ana m agwa ha na ndị ọzọ dị iche karịa ihe a na-agwa ebe niile.
Ị bụ onye ọzụzụ atụrụ gị, anyị abụghị atụrụ!
Abụ m onye m bụ ma mgbe ahụ ị dị ka Jizọs bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ
Amụma a sitere na MartinVrijland, Day Cash!
Na Guppy, I kwuru eziokwu maka m, ọ bụghị naanị gị
Gịnị ka anyị kwesịrị ime? igbanwe; letus maka mkpọchi? Echere m na nke ahụ bụ ụzọ ọpụpụ, isi
Banklọ akụ nwere ike ugbu a (nwere ike ịtọ) mee ka akaụntụ gị bụrụ ihe efu ma ọ bụrụ na ịnweghị ikwu okwu na nnọpụiche okike, igwe okwu igwefoto ebe niile.
" Njikọ ihu igwe: ịzọrọ ndị mmadụ na akwa akwa akwa
Echiche nke nkezi Dutchman anwụwo: ike na-agafe »
Nleta nile: 16.129.882